15ka ugu sarreeya deeqaha waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada 2022
Tani waxay kugu noqon kartaa la yaab aad u weyn laakiin dhab ahaantii waxaa jira deeqo waxbarasho oo aan la sheegin Kanada, taas oo ah, deeqaha waxbarasho ayaa la siiyaa laakiin ardayda ma sheeganayaan. Tani badanaa waa sababta oo ah iyagu ma yaqaaniin jiritaankooda sidaa darteed wax codsi ah looma soo bandhigin sidii looga guuleysan lahaa iyaga oo ka dhigaya inay noqdaan cid aan sheegan.
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa wax ku saabsan deeqdan waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada iyo habka arjiga loo baahan yahay si loo dalbado. Akhris wanaagsan!
Marka la aqoonsado halka waxbarasho ee ugu sareysa adduunka, Kanada badanaa waxay ka muuqataa saddexda darajo ee ugu sarreeya. Hay'adaheeda sare waxaa aduunka looga aqoonsan yahay shahaadooyin heer caalami ah iyo shahaadooyin shahaado oo HR kasta ay hayso sharaf.
Qaar ka mid ah jaamacadaha iyo barnaamijyada Kanada waxay ka mid yihiin kuwa adduunka ugu wanaagsan, iyagoo bixiya barnaamijyo badan oo kala duwan oo isugu jira bachelor, mastar, heerarka daraasadda ee daraasadda. Tani waa mid ka mid ah sababaha ay ardayda ajaanibta ahi halkaa ugu soo qulqulaan sannad kasta si ay ugu amraan wax-barashadeeda tayada leh.
Wadanka, Kanada, sidoo kale wuxuu caan ku yahay inuu albaabada u tuuro ardayda dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada taasoo ka dhigeysa inay leedahay tirada ugu badan ee ardayda caalamiga ah ee adduunka. Marka laga soo tago in la siiyo waxbarasho tayo leh dhammaan ardayda, waxaa sidoo kale jira tallaabooyin loo dejiyay si looga caawiyo ardayda inay awoodaan waxbarashada.
Daraasadaha caalamiga ahi aad ayey qaali u yihiin oo waa caqabadda ugu weyn ee keenta in dad badani dibadda wax ugu baran waayaan. Kanada sidoo kale maaha mid ka reeban laakiin waxaa jira fursado kaalmo maaliyadeed oo muddo dheer soconaya iyo barnaamijyo loogu talagalay in lagu caawiyo ardayda si ay u gaaraan ujeedooyinkooda
Dalkani kaliya maahan inuu deeqo u fidiyo muwaadiniintiisa oo keliya laakiin sidoo kale wuxuu siiyaa ardaydan caalamiga ah ee u yimid inay raadsadaan waxbarasho tayo leh oo ay kor ugu qaadaan noloshooda. Sanadkiiba malaayiin doolar ayaa loo qoondeeyay ujeedooyin deeq waxbarasho.
Kuwani deeqaha badanaa waxay ka yimaadaan kanaallo badan sida ururada samafalka, jaamacadaha / koleejooyinka, dowladda, ardayda ka qalin jabisay, iyo dadka kale ee hodanka ah. Marka deeqaha waxbarasho ayaa loo horumariyaa si loogu taageero ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee Kanada.
Waxaa jira deeqo waxbarasho oo si buuxda iyo qeyb ahaan loo maalgeliyo, deeqo, deeqo, abaalmarino, iwm. Dhammaantood oo loogu talagalay in lagu caawiyo laguna dhiirrigeliyo ardayda inay gaaraan hamigooda waxbarasho tayo leh. Fursadahaan kaalmada maaliyadeed waa la magacaabay oo si habeysan ayaa loo qaabeeyey mid kasta oo leh qaabsocodyo codsiyo u gaar ah, qiime, shuruudaha u-qalmitaanka iyo shuruudaha, iyo waqtiga kama dambaysta ah.
Waa war caadi ah in Kanada ay bixiso deeqo badan sanadkiiba laakiin waxaadan ogaan karin ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah deeqaha waxbarasho ay dhab ahaantii sheegtaan. Xaqiiqdii, malaayiin doolar oo deeqo waxbarasho ah ayaa si aan qarsoodi lahayn sanad walba loogu qaataa Kanada oo keliya.
Waa hubaal inay su’aal tahay - maxaa u diidaya sheegasho la’aan? - waa hagaag, waxaa jiri kara arrimo qaar ka mid ah sida:
Iyagu ma caan ah, taas oo ah, ardaydu ma yaqaaniin iyaga
Qiimahoodu aad ayuu uyaryahay arday badanna waxay doorbidaan inay codsadaan deeqo waxbarasho oo leh qiime aad u weyn si ay mar uun iyo mar weynba lacag uga heli karaan.
Ma jiraan arday ku filan oo codsanaya iyaga
Nidaamkooda dalabku wuxuu noqon karaa hawl cabsi leh ama shuruudaha u qalmitaanka ee aad ugu sarreeya ardayda si ay ula kulmaan, sidaasna uga tagaan kuwa ugu fudud.
Kuwani waxay noqon karaan sababaha ay u jiraan deeqo waxbarasho oo aan la sheegan Kanada, sababo kasta oo dheeraad ah oo halkaas jira waxaa laga yaabaa inay nasiib u leedahay inaad wax ka barato deeqaha waxbarasho ee aan la sheegin Kanada.
Waad codsan kartaa deeqdan waxbarasho ee aan la sheegan sidoo kale, ha u qalloocin, sheegasho la'aantood macnaheedu maahan inaadan guuleysan karin ama waa inaadan dalban iyaga. Waxaa loola jeedaa deeqo waxbarasho oo la bixiyo laakiin ma jiro arday codsanaya iyaga sababo jira awgood kuwaas oo kor lagu taxay.
Waa muhiim inaad wax ka barato deeqdan waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada, waxaan ku soo uruuriney boostadan oo ay weheliyaan nidaamka codsigooda, u-qalmitaanka, iyo faahfaahin kasta oo kale oo kaa caawin kara inaad si guul leh u codsato oo aad ugu guuleysato.
Deeqaha waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada
Gudiga Dhismooyinka Guryaha ee Gobolka Toronto (TREBB) Deeqda waxbarasho ee Madaxweynihii hore
Hubi Tartanaga Abaalmarinta Abaalmarinta (Re)
Kulliyadda Kanada iyo Carwada Jaamacadda - $ 3,500 Abaalmarinta Abaalmarinta
Deeqaha Warshadaha korantada
TELUS Deeq waxbarasho
Deeqaha Kooxda De Beers ee Haweenka Kanada
Manulife Casharrada Casharrada Nolosha
Wadajirka Cilmi-baarista Ages Foundation iyo Bursaries
Abaalmarinta Beaverbrook Scholars
Deeqda waxbarasho ee Marcella Linehan
Jean Murray-Moray Sinclair Barnaamijka Tartan Masraxa Masraxa
MTA Edward M Evanochko Deeqda Gaadiidka
Laura Ulluriaq Gauthier deeq waxbarasho
Barnaamijka Aqoonyahanada Laurier
Halkan, waxaan ku soo uruurinnay liistada 15-ka sare ee deeqda waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada oo ay weheliso faahfaahintooda lagama maarmaanka ah ha noqonin snob deeq waxbarasho, sii wad sheegashada deeqdan waxbarasho ee aan la sheegan ee hoose:
The Raven Bursaries waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada, in kasta oo deeq-lacageedka wali lagu hago sidii loo dheellitiri lahaa biilashaada jaamacadeed. Abaalmarinta waxaa lagu qiimeeyaa $ 2,000 waxaana bixiya Jaamacadda Waqooyiga British Columbia oo kaliya halkaas ayaa lagu kireysan karaa.
Waa abaalmarin aan dib loo cusbooneysiin karin oo ay heli karaan ardayda jaamacadda soo galaysa markii ugu horreysay ee muujiyey waxqabad tacliimeed heer sare ah iyo baahi dhaqaale. Shuruudaha u-qalmitaanka waa:
Codsaduhu waa inuu ka diiwaangashan yahay jaamacad shahaado, diblooma, ama barnaamij bachelor ah qayb kasta oo daraasad ah.
Furan ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha
Waa inuu u yimaadaa inuu wax ka barto Jaamacadda Waqooyiga British Columbia
Codsiga abaalmarintan deeq-lacageedka waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah, eeg waqtiga kama dambaysta ah halkan.
TREBB waxay bilawday barnaamijka deeqda waxbarasho 2007 waxayna wali socotaa ilaa maanta, laakiin dad aad u yar ayaa wax ka ogaanaya taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada. Sannadkiiba, TREBB waxay $ 15,000 siisaa afar arday oo ka qalin jebisay Fasalka 12 oo raadinaya waxbarashada dugsiga sare.
Guddigu wuxuu kaloo bixiyaa laba $ 5,000 kaalinta koowaad iyo laba $ 2,500 deeq waxbarasho oo kaalinta labaad ah. Ku guuleysiga deeqdan waxbarasho runtii waa wax fudud laakiin sheekooyinka ereyga ugu yar ee 1,500 waxay noqon karaan hawl aad u cabsi badan waxayna sababi kartaa sabab looga tago iyadoo aan la sheegin.
Marka laga soo tago qormada - taas oo inta badan ku saabsan mowduuc kasta oo ay soo xulaan guddiga - halbeeg kale ayaa ah in ardaydu ay muujiyaan waxqabad tacliimeed oo sare, karti hoggaamineed, iyo ka qeybgal bulshada. Codsiga wuxuu u furan yahay deganayaasha joogtada ah iyo muwaadiniinta Kanada.
Haddii aad haysato waxa ay u baahan tahay si aad ugu guuleysato deeqdan waxbarasho, ka dib u gudub codso oo arag waqtiga kama dambaysta ah halkan.
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada waxaana bixiya Golaha Khamaarka Mas'uulka ah (RGC). Waa inaad ku ciyaartaa ciyaar fiidiyoow ah si aad ugu guuleysato deeqdan waxbarasho, waxay leedahay seddex heer oo keliya oo loogu talagalay in lagu tijaabiyo fal-celintaada - waa macquul inay adag tahay sababta ay u tahay deeq-lacageed aan la sheegin.
Seddex deeq waxbarasho ayaa la heli karaa - $ 1,500, $ 1,000, iyo $ 500 - waa inaad tahay 18 jir iyo wixii ka sareeya oo aad iska diiwaangelisaa kulliyad ama jaamacad Canadian ah si aad xaq ugu yeelatid. Waxay u furan tahay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba dhammaan barnaamijyada iyo heerarka waxbarasho, laga soo bilaabo dibloomada dugsiga sare ilaa dhakhaatiirta.
Ku ciyaarida ciyaar ficil celin ah si loogu guuleysto deeqda waxbarasho waa wax aad u xiiso badan, hel ka bilaabay halkan.
Kulliyadaha Kanada iyo Carwada Jaamacadda waxay ku siinayaan waxbarasho bilaash ah simistar!
Kani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada waxaadna ku codsan kartaa hadda afar talaabo oo sahlan.
Saxiix ka soo qaad Kanada iyo carwada jaamacadeed oo ka soo qaybgal
Ka dalbo macluumaad ugu yaraan mid ka mid ah carwooyinka carwada.
Hubi waababyada oo qaado dhowr webinars iyo ugu dambeyn,
Weydii su'aalo ku saabsan barnaamijyada aad xiiseyneyso.
Markaad dhammaystirto dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxaad u qalmi doontaa inaad ku guuleysato $ 3,500 oo aad u dalban karto waxbarashadaada dugsiga sare ka dib.
Deeqdani waxay u furan tahay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba barnaamij kasta oo waqti-buuxa ah ama waqti-dhiman ah dhammaan heerarka iyo qaybaha waxbarashada. Diiwaangeli Now!
Qiimaha deeqdani wuxuu ka badan yahay $ 130,000, oo ay bixiyaan Electro-Federation Canada (EFC) iyo xubnaheeda, waana mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan la sheegin Kanada. $ 130,000 wuxuu daboolayaa ilaa 52 deeq waxbarasho oo kala duwan waxaadna dalban kartaa ugu badnaan seddex.
Tani waa fursadaada inaad sheegato!
Codsadeyaashu waa inay noqdaan muwaadin Kanadiyaan ah ama deganaansho rasmi ah oo dhammaystay sannadkoodii ugu horreeyay ee hay'ad dugsi sare oo la aqoonsan yahay oo ilaaliyay ugu yaraan 75% celcelis ahaan. Mid kasta oo ka mid ah deeqaha waxbarasho ee 52 wuxuu leeyahay shuruudo gaar ah, iyaga dib u eeg.
Tani waa mid kale oo ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan laga codsanin Kanada ee ay bixiso Jaamacadda Waqooyiga British Columbia laakiin ay ku deeqday TELUS si loo qaabeeyo loona saameyn ku yeesho helitaanka barashada dadka deggan Waqooyiga British Columbia.
Qiimuhu waa $ 3,000 oo u furan ardayda waqti-buuxa ah oo muujiya heer sare oo tacliimeed isla markaana ah kuwa deggan Waqooyiga British Columbia. Sidoo kale waa inaad raacdaa shahaadada bachelorka qayb kasta oo daraasad ah.
Nidaamkan deeq-lacageedka uma muuqdo hawl culus. Ma xiiseyneysaa sheegashadeeda? Riix halkan.
Ma la yaabtay inay jiraan deeqo waxbarasho oo aan la sheegan oo Kanada ku saabsan haweenka?
Tani waa deeq waxbarasho oo ay ku deeqday Haweenka Qaramada Midoobay (UN) Haweenka (HeForShe Initiative) oo loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo ka mid noqoshada haweenka, gaar ahaan beelaha asaliga ah, waxbarashada sare. Waxaa jira afar abaalmarin ama ka badan oo la heli karo mid kasta oo lagu qiimeeyo $ 2,400.
Si aad u dalbato deeqdan waxbarasho, codsadayaashu waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
Waa inuu ahaadaa arday guri joog ah, taas oo ah, deggane rasmi ah ama muwaadin Kanada ah
Kaliya dumarka waa inay codsadaan
Waa inuu galayaa sanadka ugu horeeya ee barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacad laga aqoonsan yahay dugsiga sare ee Kanada.
Waa inuu galayaa STEM (Saynis, Teknolojiyad, Injineer, iyo Xisaab) ama koorso laxiriira STEM.
Codso deeqdan waxbarasho halkan
Tani waa $ 10,000 deeq waxbarasho oo ay bixiso Manulife si loogu caawiyo ardayda doonaya inay sii wataan waxbarashada dugsiga sare ka dib laakiin ay ka dhinteen waalidkood ama ilaaliyahooda isla markaana ay ku yar tahay caymiska nolosha. Ardayda xaaladdan ku jirta, sinnaba uma taageeri karaan naftooda si ay u gaaraan himilooyinkooda xirfadeed waana halka Manulife ay ka timaaddo.
Iyada oo deeqdan waxbarasho, ardaygu wuxuu ugu dambeyntii awoodi doonaa inuu dhammaystiro waxbarashadooda sare xoogaa fudud. Si aad u codsato deeqdan waxbarasho, waxaa laga yaabaa in laguu oggolaado ama aad mar hore ka diiwaangashan tahay xarun sare sida kuleej, jaamacad, ama dugsi xirfadeed.
Sidoo kale waa inaad u dhaxeysaa da'da 17 ilaa 24 sano waqtiga dalabka. U soo gudbi curis 500-eray ah ama fiidiyow 3 daqiiqo soconaya oo ku saabsan sida luminta waalidkaaga ama ilaaliyahaagu ay kuu saamaysay dhaqaale ahaan iyo shucuur ahaanba.
Halkan ka eeg waqtiga kama dambaysta ah iyo arjiga
Ku tabaruca deeqdan waxbarasho waa Sanduuqa Ages Foundation waxaana bixiya keyd cilmi baaris oo dhif ah, oo loogu talagalay in lagu caawiyo ardayda doonaya inay raacaan tacliinta sare.
$ 15,000 ayaa loo qaybin doonaa sanadkiiba iyada oo loo marayo nidaamka arjigaan waxaana abaalmarinta lagu bixin doonaa qaddiyadahan soo socda:
Hal abaalmarin $ 5,000
Hal $ 5,000 BIPOC (Madow, Asal ahaan, iyo Dad kale oo Midab leh)
Shan $ 1,000 deeqo oo kuxiran tirada guud ee codsiyada wali la helay.
Si aad xaq ugu yeelatid, codsadayaashu waa in loo diiwaangeliyo arday ka qalin jabisay hay'ad Canadian ama caalami ah, waa inay ku sameeyaan cilmi baaris ku saabsan hantida keydka ah ee cilmi-baarista ee sadaqadda leh oo diiradda la saarayo deegaanka ama qayb ahaan.
Isbahaysiga Cilmi-baarista ee Ages Foundation iyo Bursaries waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan laga helin Kanada iyo haddii aad rabto inaad sheegato, halkan ka dalbo
Abaalmarinta Beaverbrook Scholars waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan laga codsanin Kanada waxaana aasaasay aqoonyahanno hore oo Beaverbrook ah waxaana lagu xallin karaa oo keliya Jaamacadda New Brunswick Deeqdan ayaa la siiyaa saddex arday oo muujiya waxqabad tacliimeed heer sare, baahi dhaqaale, iyo ka qeyb qaadashada bulshada.
Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 50,000 arday kasta oo daboolaya afar sano oo waxbarashadooda jaamacadeed. Marka laga reebo u-qalmitaanka kore, codsadayaashu waa inay ahaadaan kuwo deggan New Brunswick waana inay ka qalin-jabiyaan dugsi sare oo ku yaal New Brunswick si ay u sii wataan barnaamij kasta oo bachelor ah oo ka socda Jaamacadda New Brunswick.
Waxaan ku sharxayaa inaadan ogeyn inay jiraan deeqo waxbarasho oo loogu talagalay kuwa ku jira qaybta Kalkaalinta, miyaad? Abaalmarintani waa qayb ka mid ah liistadan maxaa yeelay dad badani ma oga inay jiraan taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada.
The Marcella Linehan Scholarship waa abaalmarin sanadle ah oo la siiyo kalkaaliye caafimaad oo diiwaangashan oo dhammaystiraya Master of Nursing ama Doctorate of Nursing Program. qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 2,000 kuwa ka diiwaangashan barnaamijka kalkaalinta waqtiga-buuxa ah iyo $ 1,000 ardayda nuska-nuska ah.
Si aad xaq ugu yeelatid deeqda waxbarasho, waa inaad ka diiwaangashan tahay barnaamijka qalin-jabinta kalkaalinta caafimaadka ee jaamacad Canadian ah oo la aqoonsan yahay, waa inaad ku guuleysatey ugu yaraan celcelis ahaan celcelis ahaan 70% barnaamijkoodii hore ee kalkaalinta, iyo sidoo kale inaad muujiso heerka dulsaarka / warshadaha meel gaar ah oo kalkaaliso ah.
Ma xiisaynaysaa deeqdan waxbarasho? Halkan ka sheeg.
Deeqdani waxaa si gaar ah loogu talagalay ardayda ka diiwaangashan ama damacsan inay ku sii wataan xirfad tiyaatarka. Taasi waa dhammaan shuruudaha aad u baahan tahay inaad dalbato oo aad ku guuleysato deeqdan waxbarasho.
Sannadle, MTA (Ururka Manitoba Trucking Association) waxay bixisaa $ 10,000 deeq waxbarasho oo lagu bixiyo laba qaybood: abaalmarinno tacliimeed iyo abaalmarinno tababar. Si aad u dalbato deeqdan waxbarasho waa inaad ku sugantahay gobolka Manitoba oo aad dooneysaa inaad wax ku barato hay'ad aqoonsi sare oo dugsi sare ah oo la aqoonsan yahay oo ku taal goobta gaadiidka.
Abaalmarintani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee aan laga codsanin Kanada, haddii aad xiiseyneyso inaad sheegato bilow codsigaaga hadda.
Tani waa $ 5,000 deeq waxbarasho oo ay bixiso Qulliq Energy Corporation (QEC) oo loogu talagalay ardayda ka diiwaangashan hay'ad dugsi sare oo la aqoonsan yahay. Sidoo kale waa inaad degan tahay Nunavut si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho, waxay khuseysaa dhammaan qaybaha waxbarashada.
Foomka dalabka ayaa la heli karaa halkan.
Tani waa deeq waxbarasho oo dhowaan la aasaasay oo ay bixiso Jaamacadda Wilfrid Laurier, dad badana ma oga oo waad ku nasiib badan tahay inaad heshay. Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 7,500 sanadkiiba illaa afar sano iyo abaalmarin waxbarasho oo khibrad leh oo ah $ 10,000 wadarta $ 40,000.
Waxaa la siiyaa toddobo arday oo la xushay, arday kasta oo hela $ 40,000 abaalmarin laakiin waa inaad ilaalisaa heerka tacliinta sare si aad u sii cusbooneysiiso deeqda waxbarasho. Ku guuleystayaasha waxaa lagu xushaa iyada oo lagu saleynayo guusha waxbarashadooda iyo soo bandhigida bayaanka shaqsiga, liiska waxqabadyada iyo / ama guulaha, iyo warqad tixraac ah.
Ka faa'iidayso fursadda ka mid noqoshada dadka ugu horreeya ee wax ka ogaanaya deeqdan waxbarasho iyo si dhakhso ah u codso
Marka, kuwani waa deeqaha waxbarasho ee aan la aqoon ee laga heli karo Kanada fiiri waqtigooda ugu dambeeya iyo foomka dalab kasta oo ka mid ah xiriiriyeyaasha la siiyay oo ay bilaabaan habraacyada lagama maarmaanka u ah inay bilaabaan arjiga deeqda waxbarasho
Waad dalban kartaa inta badan deeqdan waxbarasho sida aad rabto inaad u kordhiso fursadahaaga inaad hesho ugu yaraan mid ama laba ka mid ah taas oo door weyn ka ciyaari doonta dib-u-dhigista khidmadaha waxbarashada. Sidoo kale, u akhri tilmaamaha si taxaddar leh oo ha isku qaldin midba midka kale.
Barashada Hagaha Dibadda Deeqaha Canadianka Deeq waxbarasho oo buuxa Deeqaha Deegaanka Deeqda Masters Deeqaha PhD Deeq waxbarasho oo diblooma ah Talooyinka deeqaha waxbarasho Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho
deeqaha waxbarasho ee aan caan ahayn ee canadadeeqaha waxbarasho ee Kanada ee aan la sheegandeeqaha waxbarasho ee aan sheegan Kanadadeeqaha waxbarasho ee aan la sheegan ee Kanada
Previous Post:30 Koorsooyinka Shahaadada Khadka Tooska ah ee Xirfadeed
Aferdita wuxuu leeyahay,
May 12, 2022 at 11: am 52
Pingback: 49+ Deeqaha Kuleejka ee Aan La Sheegin Sannad kasta | Codso Hadda
miko wuxuu leeyahay,
August 27, 2021 at 7: 12 pm
hy im oo ka yimid pakistan waxaanan rabaa in aan tacliin sare ka sameeyo dalal kale laakiin ma awoodo sidaas plz haddii ay taasi i caawin karto waxaan rabaa in aan helo deeq waxbarasho sidaa darteed plz caawi ..